China Glyphosate စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ Lemandou
အဓိကအကြောင်းအရာ (g / L) 80480
PH တန်ဖိုး ၄.၀-၇.၀
မီသာနန် (ဂ / ကီလိုဂရမ်)
1mol / L ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် (%) တွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Ephi ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dale Kemery က glyphosate အတွက်အန္တရာယ်ခန့်မှန်းချက်များသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်အောက်တွင်ရှိသည်။ EPA သည် glyphosate ကို Group E ဓာတုဗေဒပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်လူသားများတွင်ကင်ဆာမဖြစ်စေကြောင်းခိုင်လုံသောအထောက်အထားများရှိသည်။ ... EPA သည်အများပြည်သူကျန်းမာရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်အန္တရာယ်မရှိကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
၁။ ဂလိုက်ဖော့ဆိတ်သည်ဇီဝဆေးဝါးပေါင်းသတ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ phytotoxicity ရှောင်ရှားရန်ကလျှောက်ထားသည့်အခါကောက်ပဲသီးနှံများညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
၂။ Imperata cylindrica၊ cyperus rotundus စသည်ဖြင့်နှစ်ရှည်ပေါင်းပင်များအတွက်လိုချင်သောထိန်းချုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပထမဆုံးလျှောက်လွှာပြီးနောက်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုပါ။
4. နေသာသောနေ့များနှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်တွင်ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ၄ ​​င်း၏မှုတ်ထုတ်ပြီးနောက် ၄-၆ နာရီအတွင်းမိုးရွာလျှင်ဆေးဖျန်းသင့်သည်။
၅။ Glyphosate သည်အက်စစ်ဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသောအခါပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာများကိုတတ်နိုင်သမျှအသုံးပြုသင့်သည်။
အထုပ်ပျက်စီးသောအခါ 7. သည်မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆမှုအောက်ရှိအစိုဓာတ်နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းသို့ပြန်သွားနိုင်ပြီးအပူချိန်နိမ့်နိမ့်၌သိုလှောင်သည့်အခါကြည်လင်သောစုပ်ယူနိုင်သည်။ ထိရောက်မှုရှိစေရန်ကြည်လင်သောအရည်ပျော်စေရန်ကွန်တိန်နာအားလုံးလှုပ်သင့်သည်။
၈။ ၎င်းသည်စနစ်တကျထိန်းချုပ်သောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ပက်ဖြန်းသည့်အခါအခိုးအငွေ့သည်ပစ်မှတ်မဟုတ်သောအပင်များသို့စီးဆင်းခြင်းနှင့် phytotoxicity ဖြစ်စေခြင်းမှကာကွယ်ရန်သတိပြုပါ။
၉။ ပိုးသတ်ဆေးများကိုပျော်ဝင်စေသည့်အခါကယ်လစီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ အလူမီနီယမ်ပလာစမာ၊ သန့်ရှင်းသောပျော့ပျောင်းသောရေနှင့်အသုံးပြုရန်ရှုပ်ထွေးလွယ်ကူပြီးရွှံ့ရေသို့မဟုတ်ညစ်ပတ်သောရေသည်ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။